Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Nidaamkan ayaa dib loo cusboonaysiiyay 30/04/202020
Ujeeddooyinka ka mid ah qodobbada Sharciga lagu soo xusay ee Ilaalinta Xogta Shakhsiyadeed, macluumaadka shaqsiyeed ee aad noo soo dirto waxaa lagu dari doonaa feyl "USERS OF WEB iyo SUBSCRIBERS", oo ay iska leeyihiin shirkadda 'Sergeyios Telemáticos SL' oo leh NIF: B19677095 iyo cinwaanka C / Blas de Otero nº 16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada). Faylkani wuxuu hirgaliyay dhammaan tallaabooyinka amniga iyo abaabul ee amniga ee lagu aasaasay Amarka Royal 1720/2007, ee horumarinta LOPD.
U dirista xogta shakhsiga ah websaydhkani waa qasab in lala xiriiro, wax laga faalloodo, la qoro barta emulador.online, qandaraas lagu bixiyo adeegyada lagu soo bandhigo degelkan isla markaana lagu iibsado buugaagta qaab dijitaal ah.
emulator.online waxay aruurin doontaa Xogta Shakhsiyadeed ee adeegsadayaasha, iyagoo adeegsanaya foomamka khadka tooska ah, internetka. Xogta Shakhsi ahaaneed ee la soo aruuriyay, iyadoo kuxiran kiis kasta, waxay noqon kartaa, kuwa kale: magac, magac awoow, emayl iyo marin u helid. Sidoo kale, marka la eego adeegyada qandaraas-bixinta, iibsashada buugaagta iyo xayeysiinta, waxaan waydiisan doonaa Adeeg-bixiyeyaasha banki ama xog-bixinno gaar ah.
Si aad uga jawaabto shuruudaha isticmaalayaasha es. Tusaale ahaan, haddii isticmaaluhu ka tago macluumaadkooda shaqsiyeed nooc kasta oo ka mid ah foomamka xiriirka, waxaan u isticmaali karnaa xogtaan si aan uga jawaabno codsigaaga oo aan uga jawaabno wixii shaki ah, cabashooyinka, faallooyinka ah ama walwalka ah ee aad ka qabto macluumaadka ku jira bogga Websaydhka, adeegyada lagu bixiyo Websaydhka, ka shaqaynta xogtaada shaqsiyeed, su'aalaha la xidhiidha qoraallada sharciga ah ee ku jira Websaydhka, iyo sidoo kale wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Si dhexdhexaad ah oo looga jawaabo faallooyinka ay isticmaaleyaashu ku sameeyeen balooggu waa.
Si loo bixiyo adeegyo aad ugu baahan lagama maarmaan u ah horumarinta wax qabaddeeda, Adeegga tooska ah ee Internetka 'Servicios Telemáticos SL' wuxuu la wadaagaa macluumaadka bixiyeyaasha soo socda iyadoo la raacayo shuruudahooda asturnaanta ee u dhigma.
Nidaamyada lagu qabanayo macluumaadka shaqsiyeed ee ay adeegsadeen emulator.online :
Markaad adeegsanayso adeegyada barnaamijka 'MailChimp' oo ah samaynta ololayaasha suuqgeynta emaylka, maareynta isdiiwaangelinta iyo dirista joornaalada, waa inaad ogaataa in MailChimp Waxay leedahay macaamiisheeda kuyaalla gudaha Mareykanka oo markaa macluumaadkaaga shaqsiyadeed waxaa loo wareejin doonaa si caalami ah waddan loo arkaa mid aan aamin aheyn ka dib markii la baabi'iyey Safe Harbor. Markaad iska diiwaangeliso, waxaad aqbashaa oo aad ogolaataa in xogtaada lagu kaydiyo barxadda MailChimp, oo fadhigeedu yahay Mareykanka, si loo maareeyo dirista joornaalada u dhigma. MailChimp wuxuu la jaanqaaday qodobbada heerka EU ee ku saabsan ilaalinta xogta.
Iibinta daabacaada: Xariirka waxaad ka iibsan kartaa daabacaadaha iyo macluumaadka wax soo saarka ee internetka 'Servicios Telemáticos SL', kiiskan, macluumaadka iibsadaha (Magaca, magaca, iyo taleefanka, cinwaanka boostada iyo emaylka) ayaa looga baahan yahay habka Paypal-ka qaab ahaan. ee bixinta.
Isticmaalayaasha way awoodaan ka bixi rukhsad wakhti kasta adeegyada ay bixiso emulador.online isla Joornaalka.
Emulator.online waxay kaloo barataa doorbidayaasha isticmaaleyaasheeda, astaamaha dadka, qaab dhismeedka taraafikada, iyo macluumaad kale si wada jir ah si aan si wanaagsan u fahamno cidda dhageystayaashayadu tahay iyo waxay u baahan yihiin. Raadinta xulashada isticmaaleyaashayada ayaa waliba naga caawineysa inaan ku tusno xayeysiiska ugu habboon.
Isticmaalaha iyo, guud ahaan, qof kasta oo dabiici ah ama sharci ah, wuxuu abuuri karaa bogga 'hyperlink' ama qalab isku xira farsamo (tusaale ahaan, xiriiriyeyaasha ama badhamada) websaydhkooda si ay u isticmaalaan emulator.online ("Hyperlink"). Samaynta 'Hyperlink' micnaheedu maahan in si kasta oo ay jirto jiritaanka xiriir u dhexeeya emulator.online iyo milkiilaha bogga ama bogga bogga ee Hyperlink lagu asaasay, mana aqbalid ama oggolaashaha ay leedahay emulator.online waxyaabaha ku jira ama adeegyada. Si kasta oo ay ahaataba, emulator.online waxay xaq u leedahay inay mamnuucdo ama hakad galiso xiriir kasta oo la soo galo Websaydhka waqti kasta.
Isticmaalayaasha way awoodaan ka bixi rukhsad wakhti kasta adeegyada ay bixiyaan emulador.online isla joornaalada.
Adeeggu wuxuu dammaanad ka qaadayaa in xogta shaqsiga ah ee lagu bixiyo qaabab kaladuwan ay run tahay, lagu qasbay inay la socodsiiso wixii wax ka badal ah. Sidoo kale, Adeeggu wuxuu dammaanad ka qaadayaa in dhammaan macluumaadka la bixiyay ay u dhigmaan xaaladdooda dhabta ah, inay tahay mid cusub oo sax ah. Intaas waxaa sii dheer, Adeegsigu wuxuu ballan qaadayaa inuu xogtooda markasta cusbooneysiisto, isagoo mas'uul ka ah khaladka ama been abuurka xogta la bixiyay iyo waxyeelada ay u keeni karto tan Sabtiga 'Servicios Telemáticos SL' oo ah milkiilaha websaydhka internetka.
Waad hagi kartaa isgaarsiintaada waxaadna isticmaali kartaa xuquuqda marin u hel, sixitaan, baajin iyo mucaarad Boostada boostada ee C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) ama iimayl ahaan: info (at) emulador.online oo ay weheliso caddeyn sharci ku dhisan, sida sawir qaabeynta DNI ama wax u dhigma, oo muujinaya maadada "DATA PROTECTION".
Isticmaaluhu wuxuu cadeynayaa in lagu wargaliyay shuruudaha ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, aqbalaada iyo ogolaanshaha daaweynta ee Online Servicios Telemáticos SL qaabka iyo ujeedooyinka lagu sheegay ogeysiiska sharciga ah.
Online Servicios Telemáticos SL waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho siyaasaddan si loogu waafajiyo sharciga cusub ama qaanuunka iyo sidoo kale ku dhaqanka warshadaha. Xaaladaha noocaas ah, Bixiyuhu wuxuu ku dhawaaqi doonaa boggan isbeddelada la soo saaray iyadoo la filaayo macquul ahaan filashadooda.
Iyadoo la raacayo LSSICE, Online Servicios Telemáticos SL ma fuliso dhaqamada SPAM, sidaa darteed ma dirto emayl ganacsi oo aan horey loo weydiisan ama loo oggolaan Isticmaalaha, mararka qaarkood, waxay u diri kartaa dallacaad u gaar ah iyo dalabyo gaar ah iyo dhinacyada saddexaad, kaliya kiisaska aad haysato oggolaanshaha dadka qaata.
Sidaas awgeed, mid kasta oo ka mid ah foomamka ku yaal Websaydhka, Adeeggu wuxuu awood u leeyahay inuu siiyo oggolaanshahooda muujinta ah ee ah inuu helo "Wargeyskayga", iyadoo aan loo eegin macluumaadka ganacsiga ee wakhtigiisa lagu codsaday. Sidoo kale waad iska noqon kartaa rukumadaada si toos ah isla joornaalada.